Maitiro ekuwana iwo eWifi mapassword akachengetedzwa pane yedu kifaa (Tweak) | IPhone nhau
Maitiro ekuwana iwo eWifi mapassword akachengetedzwa pane yedu kifaa (Tweak)
Kutenda kuunzwa kweICloud, pese patinochengeta Wifi password pane chero chishandiso chine iCloud yakavhurwa, kiyi iyi, pamwe neiyo SSID, inochengetwa muICloud keychain uye inowanikwa kune ese madhizaina pasina kuita zvachose chinhu. Kubva kuMac kwedu tinogona kukurumidza kuwana ese mapassword atakachengeta muKiyi, zvinosuwisa kuti hatigone kuwana ruzivo urwu kubva kunharembozha yedu, Kunze kwekunge isu takaisa iyo Wifi Passwords tweak, iyo tweak iyo ichatibvumidza isu kuti tizive uye tigovane iyo Wifi password yechero kubatana chero nguva.
Kutenda kuWifi Passwords isu tinokwanisa kuwana ese eWifi mapoinzi akanyoreswa mumudziyo wedu kuitira kuti tikwanise kukurumidza kugovana navo kushamwari, vatinoziva kana mhuri. Iri basa rakanakira kana tichigara tichishanyira nzvimbo inopa yemahara password-yakachengetedzwa internet kubatana uye isu tinomanikidzwa kuigovana neese watinosangana naye munharaunda.
Wifi Passwords anowanikwa mahara kurodha pasi paCydia's BigBoss repo uye inotitaridza runyorwa neese ekuwana poindi akanyoreswa mumudziyo wedu. Pazasi pezita rekupinda izita ndiyo password yeumwe neumwe. Kana isu tikabaya pane yega yega, iyi tweak inotipa sarudzo mbiri: kopota zita reSSID kana kuteedzera password.
Kana isu tikabaya pane yega SSID, tinogona tora rumwe ruzivo nezve kubatanidza kune internet, senge zita, password, mazuva mangani apfuura isu takabatana, kekupedzisira patakazviita uye kana iko kubatana kwaingoitika otomatiki kana manyorerwo. Sezvo isu tichiona nekuda kweiyi tweak hatizofanirwe kushandisa iCloud Keychain paMac yedu zvakare.Wifi Passwords inoenderana kubva kuIOS 7 zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Maitiro ekuwana iwo eWifi mapassword akachengetedzwa pane yedu kifaa (Tweak)
tvOS ajoina Apple yeruzhinji beta chirongwa